Shina: Fihetseham-po Manoloana Ny Fandraràna an’i Sola Aoi, Japoney Malaza Mpilalao Horonantsary Mamoafady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2012 3:38 GMT
Vakio amin'ny teny Български, Magyar, বাংলা, Ελληνικά, 日本語, English
Nametraka fepetra famerana [zh] amin'ny fisehoana an-tsehatra ho an'ireo mpampiala voly miaraka amina “endrika ratsy” ny Sampan-draharaham-panjakana Mpandrindra ny Horonantsary amin'ny Haino Aman-jerin'i Shina (SARFT), izay nitarika ny fanalàna ny fanasongadinana ilay Japoney mpilalao horonantsary mamoafady Sola Aoi tanatinà fandaharana amin'ny fahitalavitra any Shina.
I Sola Aoi no mpilalao horonantsary mamoafady malaza indrindra any Shina. Nandritra ilay Shanghai Expo 2010, niasa ho mpitondra teninà vavahadin-tanonkala iray tanatin'ny ankamaroan'ireo hetsika nandritra ilay fampirantiana ny tenany. Mihoatra ny 11 tapitrisa ireo mpankafy ny kaontiny ao amin'ny Sina Weibo [zh].
Na eo aza ny fanatsarany ny endriny any Shina amin'ny fandraketana horonantsary bitika ao anaty aterineto, tsy afa-miala amin'io fandraràna io ny tenany. Mazava ho azy fa sahiran-tsaina ireo mpankafy azy. Ho fanehoan”izy ireo ny fanohanany an'i Sola, maro amin'izy ireo no nifidy ny hampiseho teny filamatra nandritra ny lalao baolina kitra iray tany Guangzhou ny 17 Aprily 2012. Milaza hoe: “Anay ireo Nosy Diaoyu [milaza ny fifanolanana ara-tany momba ireo nosy ireo ataon'i Shina sy Japana], an'izao tontolo izao i Sola Aoi”:
Nisarika ny sain'ny maro ary niparitaka manerana ny Aterineto io teny filamatra io, izay sady maka ny fihetseham-po nasionalista mikasika ny fitakiana ireo Nosy Diaoyu sy ny firahalahiana iraisam-pirenena asetrin'ireo mpankafy ny horonantsary mamoafady.
Ilay tsikeran’ i Song Zude [zh], mpampiasa ny Weibo, no naneho mazava indrindra ny fahasahiranan-tsain'ireo Shinoa mpankafy an'i Sola:
@单骑千里：Anatinà fiarahamonina mikorontana toy ny antsika, loharanom-pahafinaretanay ny mpampianatra Sola Aoi. Mitsiriritra ery ny handrava izany fahafinaretana izany amin'ny alalan'ny fandraràna an'i Sola ny SARFT. Raha tsy eo i Sola, aiza ireo otaku [geeks] sy mpiasa mpifindra monina avy any ambanivohitra no hikaroka fahafinaretana?
Manazava [zh] ny antony mahatonga an'i Sola Aoi halaza any Shina i Yang Guoying: